Tarihte Bugün :6Şubat 1921 Şimendifer Umum Müdürlüğü görevinden istifa eden Behiç Beyin... - RayHaber
[28 / 09 / 2019] အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်က Metro တွေ့ရှိ 175 ယူရိုသန်းအကြွေး	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[28 / 09 / 2019] သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Bilkent စီးတီးဆေးရုံ Facility Continues	06 တူရကီ
[28 / 09 / 2019] သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဦးစီးဌာနHaydarpaşaရထားဘူတာစာချုပ်များတောင်းဆိုဖို့ဖြစ်တယ်!	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[28 / 09 / 2019] ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်အား Sakarya တစ်ကွေ့အချက်ဖြစ်လိမ့်မည်	54 Sakarya
[28 / 09 / 2019] လုပ်ဖို့ Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် 100 အမျိုးသမီးများနေ့ဝန်ထမ်းရေးရာ	33 Mersin
[28 / 09 / 2019] Metro သည်ကုမ္ပဏီ Mersin နှင့်အတူပဏာမအင်တာဗျူးစတင်	33 Mersin
[28 / 09 / 2019] ငလျင် TRIGGER သည် Mi တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ် Project မှမျှော်မှန်းထားသည်?	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[27 / 09 / 2019] အဆိုပါ Beytepe ကျောင်းပရဝုဏ်ကျောင်းပရဝုဏ်ဆွဲဆောင်မှုများသို့အခမဲ့လွန်း	06 တူရကီ
[27 / 09 / 2019] အဆိုပါညပျံသန်းမှုများနှင့်ယာဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြည့်ထံမှİETT	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[27 / 09 / 2019] channel ကျွန်းများခရိုင်အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အတူ 19 ကနေရရှိလာတဲ့ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
Homeအထွေထွေသမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ရထားလမ်းတာဝန်Behiçဦးနှောက်၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုမှနှုတ်ထွက်သူကိုဖေဖော်ဝါရီလ61921 ...
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ရထားလမ်းတာဝန်Behiçဦးနှောက်၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုမှနှုတ်ထွက်သူကိုဖေဖော်ဝါရီလ61921 ...
06 / 02 / 2015 Levent Ozen အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက် 0
နှုတ်ထွက်မယ့်အစားဗိုလ်မှူးကြီး Halit Bey Bey ခနျ့အပျထားသူကိုဖေဖော်ဝါရီလ61921 ရထားလမ်းအထွေထွေညွှန်ကြားမှုBehiçကသူ့မစ်ရှင်စတင်ခဲ့သည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ61977 လျှပ်စစ်ရထားလမ်းဟာအစ္စတန်ဘူလ်-Adapazari လိုင်းမှာအချိန်ပေါ်တော့တယ်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ရထားလမ်း၏ဖေဖော်ဝါရီလ61921 အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ... 06 / 02 / 2016 ယနေ့တွင်နုတ်ထွက်ထက်ဗိုလ်မှူးကြီး Halit Bey Bey ကသူ့မစ်ရှင်စတင်ခန့်အပ်ထားသောသူကိုသမိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ61921 ရထားလမ်းအထွေထွေညွှန်ကြားမှုBehiç၌တည်၏။ ဖေဖော်ဝါရီလ61977 လျှပ်စစ်ရထားလမ်းဟာအစ္စတန်ဘူလ်-Adapazari လိုင်းမှာအချိန်ပေါ်တော့တယ်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ရထားလမ်း၏ဖေဖော်ဝါရီလ61921 အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ... 06 / 02 / 2017 ယနေ့တွင်နုတ်ထွက်ထက်ဗိုလ်မှူးကြီး Halit Bey Bey ကသူ့မစ်ရှင်စတင်ခန့်အပ်ထားသောသူကိုသမိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ61921 ရထားလမ်းအထွေထွေညွှန်ကြားမှုBehiç၌တည်၏။ ဖေဖော်ဝါရီလ61977 လျှပ်စစ်ရထားလမ်းဟာအစ္စတန်ဘူလ်-Adapazari လိုင်းမှာအချိန်ပေါ်တော့တယ်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: မေလ 27 1939 ပြည်နယ်မီးရထားနှင့်ဆိပ်ကမ်းအကြှနျုပျ၏စီးပွားရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ... 27 / 05 / 2013 ယနေ့တွင်သမိုင်းမေလတွင် 27 1939 အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန (ပင်လယ်, သံ, လေကြောင်းလိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း) အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့သွားလေ၏ 3611 / 12 ရေတွက်ဥပဒ related ။ မေလ 27 1939 ပြည်နယ်မီးရထားနှင့်ဆိပ်ကမ်းအိမ်ခြံမြေအထွေထွေညွှန်ကြားမှုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အသစ်ထူထောင်န်ကြီးဌာနမှချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ မေလ 27-1944 Diyarbakir လူ့ရထားလမ်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ဟန်ဂေရီ Baron Hirsch ကဧပြီလ 13 1896 တစ်ဦးနှောက်သွေးသွန်၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ 13 / 04 / 2012 ဧပြီလ 13 1896 ဟန်ဂေရီ Baron Hirsch ကဦးနှောက်သွေးသွန်၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ ဥရောပပဲရစ်တွင်ကျင်းပအသုဘအများအပြားထင်ရှားတဲ့ကိန်းဂဏန်းများတက်ရောက်ခဲ့သည်။ Hirsch က Rumeli 800 အများစုသန်းပြင်သစ်တစ်ဦးအမွေအနှစ်များရထားလမ်းကျန်ရစ်ဆည်းပူးခဲ့သည်။ ပြင်သစ် 180 သန်းယုဒလူတို့အာဂျင်တီးနားထဲမှာကိုလိုနီ left နေစဉ်သန်းပြင်သစ် 50 မှဂျူးချစ်ခြင်းမေတ္တာကို။ Thessaloniki-အစ္စတန်ဘူလ်မီးရထားကော်နက်ရှင်လိုင်းဖွင့်လှစ်။ စက်တင်ဘာလမျဉ်းလိုက်လျောပြင်သစ်မှပေးထားခဲ့သည် xnumx't ။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ဟန်ဂေရီ Baron Hirsch ကဧပြီလ 13 1896 တစ်ဦးနှောက်သွေးသွန်၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ 13 / 04 / 2015 ယနေ့တွင်သမိုင်းဧပြီလ 13 အတွက် 1896 Baron Hirsch ကဟန်ဂေရီတစ်ဦးနှောက်သွေးသွန်၏အနိစ္စရောက်လေ၏။ ဥရောပပဲရစ်တွင်ကျင်းပအသုဘအများအပြားထင်ရှားတဲ့ကိန်းဂဏန်းများတက်ရောက်ခဲ့သည်။ Hirsch က Rumeli 800 အများစုသန်းပြင်သစ်တစ်ဦးအမွေအနှစ်များရထားလမ်းကျန်ရစ်ဆည်းပူးခဲ့သည်။ ပြင်သစ် 180 သန်းယုဒလူတို့အာဂျင်တီးနားထဲမှာကိုလိုနီ left နေစဉ်သန်းပြင်သစ် 50 မှဂျူးချစ်ခြင်းမေတ္တာကို။ Thessaloniki-အစ္စတန်ဘူလ်မီးရထားကော်နက်ရှင်လိုင်းဖွင့်လှစ်။ စက်တင်ဘာလမျဉ်းလိုက်လျောပြင်သစ်မှပေးထားခဲ့သည် xnumx't ။
Lanai °±တစ်°ဖြစ်လာသည်: ±± MSA ကိုအလှူငွေ z စစ်ဆေးရေးဝန်ဆောင်မှု Alain nacaktä± r ±
1: အောက်တိုဘာလ 10 00 @ - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မယ့်အစားလက်ရှိနယူး ISA ဟာ ISA ၏ရယူခြင်း၏VelimeşeKapıkule Catenary လိုင်း
1: အောက်တိုဘာလ 14 00 @ - 15: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဟန်-Cetinkaya လျှပ်စစ်ဓာတ်အား Facility တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း
2: အောက်တိုဘာလ 10 00 @ - 11: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မော်တော်ကားငှားရမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် (TÜVASAŞ)
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Bilkent စီးတီးဆေးရုံ Facility Continues
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ရွေးချယ်မှု: "Mersin အကယ်စင်စစ်ကျနော်တို့အဲဒီမှာတစ် Cruise နဲ့ဆိပ်ကမ်းလိုအပ်ပါတယ်"
ဟောငျး Merko လမ်းဆုံ၎င်း၏ signal System ကိုလာ
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးစနစ်အား Sakarya တစ်ကွေ့အချက်ဖြစ်လိမ့်မည်
လုပ်ဖို့ Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် 100 အမျိုးသမီးများနေ့ဝန်ထမ်းရေးရာ
မြေပေါ်မှာတွေ့ရှိ Elevators နှင့်စက်လှေကားများအတွက် Kocaeli အထွေထွေကာလအပိုင်းအခြားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
ငလျင် TRIGGER သည် Mi တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ် Project မှမျှော်မှန်းထားသည်?
တူရကီအတွက်စက်ရုပ်အကြီးဆုံးစုရုံးအောက်တိုဘာလ 1 စတင်!
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: Edremit ပင်လယ်ကွေ့ကနေစက်တင်ဘာလ 28 1920
ကျောင်းပွဲဖို့ IMM ကလေးများစက်ဘီးစီးထောကျပံ့ပေးလာကြ!
လုပ်ငန်းခွင် Restart မှAkçakaleနည်းလမ်း!
Diyarbakir အဝေးပြေးကား Terminal နှင့် gleaming
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ရထားလမ်း၏ဖေဖော်ဝါရီလ61921 အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: မေလ 27 1939 ပြည်နယ်မီးရထားနှင့်ဆိပ်ကမ်းအကြှနျုပျ၏စီးပွားရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ဟန်ဂေရီ Baron Hirsch ကဧပြီလ 13 1896 တစ်ဦးနှောက်သွေးသွန်၏အနိစ္စရောက်လေ၏။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်သမားန်ဆောင်မှု Afyon xnumx.bölg Loko ကို Maintenance အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမန်နေဂျာဘိန်းနှင့်စက်မှုအလုပ်ရုံဌာနနှင့်ရုံး Depot Tavsanlıကွန်ကရစ်၏ TCDD ညွှန်ကြားမှုပေါ် မူတည်. (ဖြစ်ရလိမ့်မည် ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းစက်တင်ဘာလအတွင်း Edremit Akcay-Havran လမ်းပင်လယ်ကွေ့မှ 28 1920 နှင့်အတူစတင်သည်တဲ့ acorn ဘေးလ်ရထားလမ်းဆောက်လုပ်ရေး၏ကြက်မိုင်း Manager ကိုမှတင်ဒါမည်ဖြစ်ပြီးပင်ပန်းပြိုင်ပွဲလိုက်လျောသည့် Sultan ပတ်သက်. အစိုးရဆုံးဖြတ်ချက်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဝေမျှမယ်: Facebook ပေါ်မှာမျှဝေဖို့ကိုနှိပ်ပါ (နယူး [ပို ... ]
ပထမဦးဆုံးခရီးသည်အတွက်စက်တင်ဘာလ 27 2017 BTK ရထားလမ်းစီမံကိန်းကို: သမိုငျးတှငျယနေ့တွင်
စက်တင်ဘာလ 26 1920 နာဖီးဥက္ကဋ္ဌအစ္စမေးလ်: သမိုငျးတှငျယနေ့တွင်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: Vezirhan အနီးတွင်စက်တင်ဘာလ 25 1919
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: စက်တင်ဘာလ 24 1872 မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေး
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ စက်တင်ဘာလ 2019 (530) သြဂုတ်လ 2019 (507) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (504) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (975) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
RayHaber9 ။ သူ့မွေးနေ့ဖြစ်သည်!
RayHaber9 ။ မွေးနေ့!
ဥရောပနိုင်ငံသားများကစီစဉ်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်အားကစားအပတ်လှုပ်ရှားမှုများအတိုင်းအတာအတွင်းသွက်နှင့်ဖျော်ဖြေမှုအချိန်လေးအသက်ရှင်ရန်ဆက်လက်။ အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့မြေအောက်ရထားနေ့ရက်တိုင်းအားကစားနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအပြည့်အဝယခုအပတ်နှစ်ယောက်ထက်ပိုသန်းခရီးသည်သယ်ဆောင်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) [ပို ... ]
Metro ဘော်ဒါဆောင်ကိယက်ဗ်, ယူကရိန်းတွင်အသုံးပြုအဟောင်းမြေအောက်ကားများအတွက်ပထမဦးဆုံးဘော်ဒါဆောင်၏ Podol ခရိုင်ဖွင့်လှစ်။ ကမ်ဘာပျေါမှာကျော်ကြားမြေအောက်ရထားဘူတာရုံ၏အမည်ကိုပြီးနောက်အမည်ရှိလှည်း, အသုံးပြု. အခန်းများတစ်ခုချင်းစီ။ အခန်းကိုလည်းဘူတာရုံရဲ့နံရံများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ [ပို ... ]
Tools များစောင့်ရှောက်ခြင်းခုနှစ်တွင် Erzurum Centennial အလင်းဘူတာပြတိုက်သမိုင်းထဲမှာပြသ
Erzurum ပြတိုက်, ဘယ်မှာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာသက်တမ်းရှိရှေးဟောင်းပစ္စည်း, ရထားလမ်းရဲ့သမိုင်းအပေါ်အလင်းတှရေဲ့အဓိပ်ပာ။ tools တွေ sergileniyor ထက်ပိုမိုပြတိုက်၏ဒီကဗျာအစိတ်အပိုင်း။ 300 နှစ်ပေါင်း 101 ရေနွေးငွေ့ခေါငျး ... magneto တယ်လီဖုန်း, သဘာဝဓာတ်ငွေ့မီးခွက်, ခေါင်းလောင်း, အဟောင်းကိုထိုသူအပေါင်းတို့သည်ရာစုနှစ်များစွာ။ နှစ်ပေါင်း spooled [ပို ... ]
Ford ကား Arena '' Karakomik, Movies '' ကထောက်ခံအဆိုပါပရိသတ်တွေ့ဆုံ
Ford ကားလည်း Idea အနုပညာ၏ပံ့ပိုးမှုများဖြင့်ပြင်ဆင် nulook "Karakomik, Movies" အောက်တိုဘာလ 18 အပေါ်ရုပ်ရှင်ရုံမှကြွလာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်များတွင် Ford ကားနှင့်အတူ Cem Yilmaz ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအွန်လိုင်းကြော်ငြာရုပ်ရှင်ထားပြီးအာရုံစိုက်ဘို့ပြင်ဆင်ထားမိတ်ဆက်ပြသမီ။ နိဒါန်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, ရလဒ်များကို [ပို ... ]
9 ကျောင်းစက်တင်ဘာလ 06, တနင်္လာနေ့တွင်အစ္စတန်ဘူလ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်: 00 - 14: အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများအကြား 00 နာရီအခမဲ့သင်အားငါပေးမည်။ 2019-20209စက်တင်ဘာလ 2019 ယင်းပညာသင်နှစ်တွင်တနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့သည်။ 16 လူဦးရေသန်း4သန်းမှအစ္စတန်ဘူလ်အနီးကပ်တှငျနထေိုငျ [ပို ... ]
Truck ကား Collider ရထား 34 ဂျပန်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့သည်
ဂျပန်မှာတော့ထရပ်ကားတစ်ရထားလမ်းကူးမီးရထားမှာတိုက်မိ။ ပထမဦးဆုံးကအနည်းဆုံး 34 ကလူကိုဆုံးဖြတ်ရန်အရမတော်တဆထိခိုက်မှုအတွက်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ယိုကိုဟားမားအတွက်မတော်တဆထိခိုက်မှု, တိုကျိုအနီး, ဂျပန်ရဲ့အရင်းအနှီးကယနေ့ဒေသစံတော်ချိန် xnumx't ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တစ်ရထားလမ်းကူးမှာမီးရထားနှင့်အတူတိုက်မိတစ်ဦးကထရပ်ကား။ မတော်တဆမှုအတွက် [ပို ... ]
Metro ယခု Mersin ရှိဟုနေကြသည် Izmir, တူရကီရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအစ္စတန်ဘူလ်, တူရကီအပေါ်အရေးအပါဆုံးတိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အခါမြေအောက်ရထား Mersin အတွက်အလုပ်လုပ်ကြမည်နည်း ပါလီမန်စီမံကိန်းနှင့်ဘတ်ဂျက်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် AK ပါတီ Mersin လက်ထောက် Lutfi [ပို ... ]
အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်က Metro တောင်တက်နဲ့ Big ည၏စိတ်ဝင်စားမှု
အစ္စတန်ဘူလ်မက်ထရိုသည်ယခုအခါတနင်္ဂနွေနှင့်ဘဏ်အားလပ်ရက်အပေါ် 24 နာရီပေးခြင်းနေကြသည်။ အကောင်အထည်ဖော်ရေးသြဂုတ်လ 30 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ မြေအောက်ရထားလေ့လာရေးခရီးအတွက်အစ္စတန်ဘူလ်အကျိုးစီးပွားတို့သည်ကြီးစွာသောညဥ့်ခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Ekrem İmamoğlu, အစ္စတန်ဘူလ်တနင်္ဂနွေနှင့်အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များအပေါ် [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ထောင်ခရီးသည်များမှာအစ္စတန်ဘူလ် 24235 ည၏ .. ပထမဦးစွာနာရီကဲ့သို့ဖြစ်၏
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), နှစ်ရက်ထိုရက်သတ္တပတ်၏မြေအောက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 24 နာရီဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်သတင်းအချက်အလက်ဝေမျှခြင်း၏ပထမရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလမှသြဂုတ်လ 30 31, 31 နှင့် 1 သြဂုတ်လမှသြဂုတ်လ (ယနေ့) ညအချိန်တွင် 35 ကျော်နှစ်ညတထောင်ကလူကိုဆက်သွယ် [ပို ... ]
30 သြဂုတ်လအောင်ပွဲခံနေ့တူရကီက Metro မှာကြေငြာချက်နှင့်အတူကျင်းပပြီးစီး
အဆိုပါနိုင်ငံတော်သီချင်းမှကြီးစွာသောကောင်းချီးလက်ခံခြင်းဟာတူရကီမြေအောက်ရထားမှာတစ်နေ့တစ်လျှောက်လုံးကစားခဲ့ပါတယ်။ ယင်းမက်ထရိုဘူတာရုံ၏အခြေအနေတွင် 30 သြဂုတ်လအောင်ပွဲခံနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပနှင့်အတူတူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor နှေးညွှန်ကြားချက်သီခငျြး "တူရကီရဲ့အပြောင်းအရွေ့မှာကြည့်ပါ" ကစားခဲ့သည်။ အနှေး starter အဖြစ်မက်ထရို [ပို ... ]
ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥရောပဘဏ် (EBRD), ပင်လယ်နက်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (BSTDB) နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်မြေအောက်ရထားလိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် Societe General မှစုစုပေါင်းရဲ့ 175 သန်းယူရိုငွေချေးပြဋ္ဌာန်းချက်အပေါ်ထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ EBRD က်ဘ်ဆိုက်အားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်ကြေညာချက် [ပို ... ]
Kayaş Yerkoy YHT Project မှပလက်ဖောင်းပေါ်နှင့်လြှပျစစျအလုပ်လုပ်လေလံရလဒ် (အထူးအစီရင်ခံစာ)
Ray မှ Tools များ၏ဒေါင်းလုပ်လုပ်အစ္စတန်ဘူလ် havaray ချိုင့် LINE (အထူးအစီရင်ခံစာ)
Kadikoy - Sultanbeyli Metro ရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်လိုင်းက Business ၏လျှောက်လွှာန်ဆောင်မှုများပင်မနောက်ဆုံး Project မှကောက်ချက်ချ
Eyup - Done စနစ်လွမ်းဆွတ်ဓါတ်ရထား Consultancy Services မှပစ္စည်းဝယ်ယူရေး၏Bayrampaşa Esenler ရထားလိုင်းစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ရေး
ဒီနှစ်တတိယအကြိမ်အရောင်ပုံရိပ်ကိုများအတွက် Izmir ပွဲတော်ဇာတ်စင်၏ပင်လယ်ကွေ့နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစတင်ပီပီ Izmir တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန်Tunç Soyer အသံပွဲတော်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ပထမဦးဆုံးပြိုင်ပွဲ။ အားလုံးအသင်းများကိုသာ Cygnus လှေပြိုင်ကားသမားနှင့်အတူအမျိုးသမီးများ၏ထားရှိရေး [ပို ... ]
ရွှေအဝေးပြေးကား Terminal နှင့်အဆောက်အအုံလုပ်ငန်းမှာစတင်ခဲ့
Mersin ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတက 2019 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကိုသို့ခေါ်ဆောင်သွား Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Vahap ရွေးချယ်မှု, သူတို့က Metro မှကုမ္ပဏီများအားဖိတ်စာများပို့ခြင်းစတင်ကပြောကြားသည်။ Mersin Select လုပ်ပါ, နိုင်ငံခြားရေး "ကုမ္ပဏီကဖိတ်စာပို့ခြင်းစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူတို့က Metro အတွက်အသစ်တခုဇာတ်စင်ဆီသို့ရောက် လာ. , ကပြောသည် [ပို ... ]
မီးရထား 163 ။ Kars ရထားဘူတာများတွင်ကျင်းပပြီးစီးတစ်နှစ်တာ
မီးရထား 163 ။ တစ်နှစ်တာ Kars ရထားဘူတာများတွင်ကျင်းပပြီးစီး။ 163 ။ အဆိုပါ Express ကိုတစ်လှည့်လည်အပေါ်တူရကီ Izmir ပြည်နယ်ဆငျဖိုနီသံစုံတီးဝိုင်းကနေတစ်နှစ်တာတစ်နှစ်တာလှုပ်ရှားမှုများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအဖွဲ့အစည်းများ, အရှေ့ပွိုင့် Kars ၏အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်အဆိုပါစခန်းမှာဖျော်ဖြေပွဲကိုပေး၏။ စက်တင်ဘာလတွင် 26 2019 Kars ရထားဘူတာများတွင်ကျင်းပ [ပို ... ]
TÜVASAŞ 26 အလုပ်သမားများကြေညာလိုက်သည်အမည်များကိုရိုက်ထည့်ဖို့သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီ
ပို့ဆောင်ရေး TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ Kamuran ပရင်တာ Tasks ကိုစတင်သည်
TÜDEMSAŞကိုသင်ခဲအတွက်မြှင့်တင်ရေးစာမေးပွဲ Process ကို Acceleration
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာပြောင်းလဲပွီ!
နယူး TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan ရရှိနိုင်ခဲ့
Marmaray MI ငလျင်ကိုခံနိုင်ရည်?